Fangatahana fisaraham-panambadiana amin'ny alalan'ny fitsarana. Ny fisaraham-panambadiana ny alalan ny fitsarana: antontan-taratasy - Ny Mpisolovava rehetra ao amin'ny tontolo izao! Ara-dalàna ny trano fisotroana kafe miaraka amin'ny mpahay lalàna an-tserasera.
Fangatahana fisaraham-panambadiana amin'ny alalan'ny fitsarana. Ny fisaraham-panambadiana ny alalan ny fitsarana: antontan-taratasy
Ny fisaraham-panambadiana dia sarotra ny tantara ao amin'ny fiainam-pianakavianaFa raha ny vady nanatona ity fanontaniana ity miaraka feno fahatokiana, ny fitondran-sarotra ny fomba dia ho ilaina izany. Ary matetika ny ankamaroan'ny olona tsy mahafantatra ny fomba hanombohana ny dingana, izay antontan-taratasy ilaina noho izany, izay mba hametraka azy ireo, mandra-pahoviana ny fisaraham-panambadiana fomba haharitra. Aza adino ny momba ny zava-misy fa araka ny Fianakaviana Fehezan-dalàna, ny Andininy faha, raha ny vadinao ao amin'ny toerana na ny zanakao no tena mbola tanora, fa, ny taona mbola tsy tonga ny taona, ny fangatahana fisaraham-panambadiana amin'ny alalan'ny fitsarana dia holavina, ary ny famaranana ny fanambadiana ho tsy azo tanterahina. Izany famerana dia tsy misy, raha ny filazana dia nametraka amin'ny vehivavy. Raha toa ny raharaha ahitana rehetra fepetra telo, dia ny fotoana sy ny saina amin'ny fomba tsy dia mandany betsaka loatra. Ny fampiharana dia mihatra na ny firaketana birao ao amin'ny ny toerana honenana, na ny fahefana izay ny fanambadiana dia voasoratra.
Isam-bolana no atokana ho an'ny fanaovana ny fanapahan-kevitra, rehefa avy nanolotra ny rehetra ny antontan-taratasy ilaina.
Mba antontan-taratasy ho fisaraham-panambadiana amin'ny alalan'ny fitsarana, ny fanambarana ny filazana dia tsy maintsy alefa any amin'ny fitsarana izay ny toeram-ponenana ny an'ny vady, raha velona izy misaraka. Safidy iray hafa dia azo atao, raha toa ilay mpitory dia manana miankina zaza izay tsy tonga olon-dehibe, ny fangatahana fisaraham-panambadiana ny alalan ny fitsarana azo atolotra ny mpangataka teo an-toerana ny fisoratana anarana. Ny fihaonana voalohany eo amin'ny fampiharana, dia maka toerana eo amin'ny iray volana, izay dia ho nampahafantatra anareo amin'ny alalan'ny fiantsoana ny andrim-panjakana ara-pitsarana. Mazava ho azy, dia tsy ny fisaraham-panambadiana ao amin'ny dia, misy karazana lalàna aloha ny fisaraham-panambadiana. Antontan-taratasy, ny fampiharana - izay rehetra izany dia tsy maintsy alefa, tsy tsy. Antontan-taratasy ilaina, anisan'izany ny fangatahana fisaraham-panambadiana ny alalan ny fitsarana, no atolotra manokana na voasoratra mail. Raha toa ka tsy misy fanampiny filazana ny fizarana ny fananana iombonana, amin'ny alalan'ny fikojakojana alimony, dia ny afa-tsy ho lany dia ho fandoavam-bola ny fanjakana saran'ny avy isaky ny vady, na inona na inona raha tsy nametraka ny fangatahana fandravana ao amin'ny fitsarana andrim-panjakana na ny lisitry ny birao. Ny habeny dia roubles Raha toa ianao tsy afaka ny hametraka ny fampiharana ny tenanao mameno ny fitsipika endriky ny fisaraham-panambadiana ny alalan ny fitsarana sy mamolavola ny ilaina rehetra toe-javatra sy ny fepetra takiana, dia ianao no mila fanampiana matihanina avy amin'ny mpahay lalàna. Ny tolotra omen'ny mpisolovava ho an'ny fikarakarana ny antontan-taratasy, tsy maintsy mandoa vola. Ao ny application dia tsy maintsy misy lafin-javatra maro: milaza ny pasipaoro tahirin-kevitra, angon-drakitra momba ny fisoratana anarana ny fanambadiana, ny antony mahatonga ny fisaraham-panambadiana.
Raha misy filazana fanampiny, vaovao momba azy ireo dia tafiditra ihany koa ao ny application.
Mila mba hanam-paharetana, noho ny fomba tsy fifadian-kanina, ary tao ny fivoriana voalohany ny fanapahan-kevitra dia tsy ho vitany.
Ny halavan'ny ny fizahan-toetra dia miankina amin'ny toe-javatra manokana.
Ny mpitsara, ny fitsipika rehetra, dia tsy maintsy manendry olona iray faharoa fihainoana mikasika ny raharaha. Amin'ny fandinihana voalohany dia mamaky ny mpitsara zo sy adidy.
Rehefa heverina rehetra ny fanehoan-kevitra ary milaza ny tsirairay, ny mpitsara dia hanendry ny fotoana izay azo atao ny fampihavanam-pirenena, avy amin'ny iray amin'ny telo volana.
Azo inoana fa, izany hoe ho voafetra ho iray volana, ary ny faharoa mandre dia ho hatao.
Tsara homarihina fa ny endriky ny iray, fara fahakeliny, ny antoko politika dia tsy maintsy, raha toa ka misy ny tsy fahombiazana ny roa tonta mba hanatrika ny faharoa nandre tamin'ny iray volana, ny fangatahana fisaraham-panambadiana ny alalan ny fitsarana dia ho tonga dia foanana.
Rehefa tapitra ny fotoana nomena hanaovana izany, ny dingana faharoa, dia ho nanontany ianao raha efa nanova ny fanapahan-keviny ao anatin'ny volana iray. Raha tsy mitranga izany, dia ny mitsara ny olana mikasika ny didim-pitsarana momba ny fisaraham-panambadiana. Ankehitriny, ianao no mila mba nalaina ny fanapahan-kevitry ny fitsarana sy any amin'ny rejisitry ny birao, izay ianao dia hahazo ny taratasy fanamarinana ny fisaraham-panambadiana. Tsy avy ny andro, raha ny fidirana ao amin'ny lisitry ny firaketana ny asa ao amin'ny rejisitry ny birao no natao, ny fanambadiana dia nitsahatra ny tsy misy.
Ny tapany faharoa dia afaka foana hanaporofoana ny fanafoanana fanambadiana, noho izany antony izany fanangonan-tsonia ho an'ny fanafoanana ny fanapahan-kevitry ny fitsarana dia nametraka fitarainana.
Izany dia azo atao rehefa avy nahazo ny dika mitovy ny tahirin-kevitra momba ny fiafaran ny fitsarana eo an-tanany.
Afaka mahazo ny fisaraham-panambadiana ny alalan ny fitsarana, na dia ny antsasaky ny tsy miombon-kevitra ny fanapahan-kevitra sy ny mandà ny fanambarana ny filazana. Ao amin'ny hetsika fa ny voampanga dia ankitsirano tsy manaiky ny fisaraham-panambadiana, noho izany tsy miraharaha ny mpanatrika, ny fakàna am-bavany dia nahemotra ho heny, isaky ny iray volana. Raha toa ka ny voampanga no tsy maneho ny, dia ho tonga dia nisara-panambadiana, ary ianao dia ho maimaim-poana tanteraka. Ny voampanga dia tsy manohitra ny fisarahana am-panambadiana, fa ny toe-javatra dia niforona ho toy ny hoe azy tsy azo atao mba ho eo amin'ny fandinihana. Amin'ity tranga ity, ny fitsarana dia mety hanemorana ny daty ny fakàna am-bavany. Hafa ny voampanga dia afaka mampianatra ny solontena hanatrika ny fotoam-pitsarana fa tsy azy, rehefa teo aloha namoaka ny herin ny mpampanoa lalàna avy amin'ny notary. Ny toe-javatra ao amin'ny fiainam-pianakaviana dia samy hafa, mahatratra indraindray ny hevitra fa ny fanaovana tokantrano maso lasa fotsiny zaka. Maro ny fisaraham-panambadiana dia manolo-tena ao amin'ny mendrika ny fankahalana. Mandrakariva dia ilaina ny manatona pahononan-tena sy fahamarinana izany fanapahan-kevitra, amin'ny mangatsiaka, an-tsaina, sy ny tsy ara-pihetseham-po ny hafanana. Amin'ny fihetseham-po tena matetika ny olona manao fahadisoana, izay taty aoriana dia nanenina. Izany no mahatonga ny fisaraham-panambadiana dia mendrika ny mieritreritra afa-tsy ny hatsiaka lohany. Rehefa dinihina tokoa, fianakaviana amin'ny fahasambarana, home coziness sy ny hafanana no soatoavina mendrika ny ady. Hikarakara ny tsirairay sy ny fianakaviana.
ARA-DALÀNA NY TORO-HEVITRA MAIMAIM-POANA MANODIDINA NY FAMANTARANANDRO